You chọrọ Usoro na Ọnọdụ, Nzuzo na Iwu Kuki? | Martech Zone
Nkwukọrịta na azụmahịa azụmaahịa agabigala aka. Nke a bụ eziokwu karịa ugbu a karịa mgbe ọ bụla ọzọ, na-eji ngwa anyị na-arịwanye elu na ngwaọrụ ịntanetị, ọ bụrụ na kọmputa anyị, mbadamba ma ọ bụ ekwentị anyị. N’ihi nnweta ozigbo a banyere ozi ọhụrụ, ebe nrụọrụ weebụ nke ụlọ ọrụ abụrụla ihe dị mkpa maka azụmaahịa iji wepụta ngwa ahịa ha, ọrụ ha, yana omenaala ha n’ahịa buru ibu.
Weebụsaịtị na-enye ndị ọchụnta ego ume site n’ikwe ka ha rute ma rute ndị ahịa ọhụụ na ndị dị ugbu a na pịa bọtịnụ. Nyere ọkwa dị elu nke azụmahịa emere na mpaghara dijitalụ, azụmaahịa ga-amụ anya oge niile na ichebe ọdịmma ha maka ọrụ weebụsaịtị. Nchekwa ndị ahịa dịkwa oke mkpa; na iyi egwu nke amata njirimara ka na-ewu ewu na ọrụ anyị n'ịntanetị, a ga-echekwa ozi nzuzo nke ndị ọrụ webụsaịtị.
Anyị ekwesịghị ịmekọrịta azụmahịa n'etiti nchekwa na nzuzo. Echere m na teknụzụ na-enye anyị ikike ịnwe ha abụọ. John Poindexter
Ndị ọchụnta ego nwere ike ịdaba n'ọtụtụ nsogbu ma ọ bụrụ na ha anaghị akpachapụrụ anya iji hụ na nchekwa dị adị, gụnyere usoro ịgba akwụkwọ (nke nwere ike ịbụ ogologo, dị oke ọnụ ma mebie akara gị!). O di nwute, ulo oru nwere ike ibelata ma zere kpam kpam nsogbu ndi a site na inwe ikike usoro na ọnọdụ (T & Cs) na uwe ojii nzuzos na weebụsaịtị ha. Ndị a ga-ekpuchi azụmaahịa na ndị ahịa ha iji hụ na ha abụọ ga - eme ihe omume ha na gburugburu ebe na - enweghị nsogbu.
Ikpuchido Azụmaahịa Gị: Usoro Ojiji na Ọnọdụ
Ebe obibi nke ọtụtụ weebụsaịtị ga-egosi ihe a maara dị ka usoro ojiji, nke na-eme dị ka nkwekọrịta n'etiti ndị nwe weebụsaịtị na ndị ọrụ ya. Okwu ndị a gụnyere:
The ikike na ọrụ n'etiti ndị nwe saịtị na ndị ọrụ ya
Etu esi eji webusaiti na ọdịnaya ya
Kedu na mgbe enwere ike ịnweta weebụsaịtị
ọ bụla ibu ọrụ azụmahịa ahụ nwere ike ọ gaghị enwe ike ibata ma ọ bụrụ na nsogbu bilitere
Ọ bụ ezie na ịnwe T & C dị otú ahụ abụghị iwu siri ike, ọ bara uru itinye okwu ndị a iji nye ndị ahịa nchekwa kacha mma. Mgbochi kama ịgwọ ọrịa bụ echiche nke ọtụtụ azụmaahịa ji arụ ọrụ, yabụ ntinye nke T & Cs na-enye aka maka ebumnuche azụmahịa na nke bara uru:
Ọ pụtara na ozi dị na saịtị gị metụtara azụmahịa anaghị emeghe ka mmegbu onye ọrụ (dịka ibudata ọdịnaya na-enwetaghị ikike na mmeputakwa na-enweghị ikike).
Nsonye nke T & Cs na-egbochi njedebe azụmaahịa ọ bụla nwere ike ihu; inwe usoro ekwuputara nke ọma nwere ike ichebe azụmaahịa megide ndị ọbịa na saịtị nwere ike ịchọrọ ịme ihe n'ụlọ ikpe n'ọnọdụ adịghị mma.
Inwe usoro ojiji na-enye nkọwa doro anya maka azụmaahịa na ndị ọrụ weebụsaịtị; ikike ọ bụla na ọrụ ọ bụla mmadụ abụọ ji ụgwọ ga-akọwa nke ọma ma nye ha ohere ịga n'ihu na azụmaahịa ha.
Ikpuchido Ndị Ọrụ Gị Ozi: Kuki na Nzuzo
Ọtụtụ ebe azụmahịa, ọkachasị ndị metụtara ịzụ ma ọ bụ ire ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ, ga-anakọta ụfọdụ ozi gbasara ndị ahịa ha. Nchịkọta nke ozi nkeonwe na-akpọ mkpa maka iwu nzuzo doro anya, nke (n'adịghị ka a usoro ojiji nkwekọrịta) chọrọ iwu.
Iwu nzuzo na-agwa ndị ọrụ banyere ihe nchekwa data. Iwu ahụ ga-agụnye otu azụmaahịa si ejikwa ozi nkeonwe ọ bụla ndị ọrụ nwere ike itinye na iji weebụsaịtị ha. N'okpuru Iwu nchekwa data EU, iwu ga-adiriri ma oburu na webusaiti nakọtara nkowa gunyere aha onye ahia, adreesị, ubochi omumu ya, nkowa ugwo, wdg.
A na-eji kuki iji nyochaa otu ndị ahịa si eji weebụsaịtị. Nke a na-enye ndị azụmaahịa aka ịkwado ma melite ahụmịhe onye ọrụ dabere na mmasị onye ọ bụla. Weebụsaịtị ga-etinye iwu zuru oke ma ọ bụrụ na ha tụọ ojiji ndị ọbịa n'ụzọ a na mgbakwunye na ịgbaso ihe ndị a:
Na-agwa ndị ọbịa na kuki ndị ahụ dị
Kọwa ọrụ nke kuki ndị ahụ na-eme na ihe kpatara ya
Inweta nkwenye nke onye ọrụ iji chekwaa kuki na ngwaọrụ ha
Dị ka ọ dị na Usoro na Ọnọdụ, enwere uru azụmaahịa doro anya maka azụmaahịa na ịnwe ụkpụrụ data doro anya na weebụsaịtị ha:
Usoro na ọnọdụ na-enyere aka iwulite ntụkwasị obi na ntụkwasị obi n'etiti azụmaahịa na ndị na-azụ ahịa
Enweghị ezigbo iwu nzuzo na-emebi ụkpụrụ n'okpuru Iwu Nchedo data. Azụmahịa nwere ike ị nweta nnukwu ego maka imebi iwu, ihe ruru £ 500,000!
Kedu ihe na-esote?
Igodo maka azụmahịa na ndị ọbịa na saịtị mgbe ọ bịara na web bụ nchekwa mbụ! Okwu abụọ na Ọnọdụ na Nzuzo na amụma kuki na weebụsaịtị kwesịrị iji dokwuo anya na nghọta, na-enye ndị ahịa ohere ịga n'ihu na-enye ngwongwo ha na ọrụ ha na-enye ndị ahịa ụzọ iji weebụsaịtị azụmaahịa echedoro na udo nke uche. Enwere ike ịchọta ozi ọzọ na Ụlọ Ọrụ Kọmitii Ozi.
Tags: iwu kukidata nchedo omumeỤlọ Ọrụ Kọmitii Oziiwuamụma nzuzousoro na ọnọdụusoro ojijiusoro ojiji